1.Yintoni i-Testosterone phenylpropionate? Ingaba isebenza kanjani?
I-testosterone yintsholongwane yendoda eyenzeka ngokwemvelo emzimbeni womntu. Ihormle iveliswa ikakhulu ngamadoda ngama-testicles. Le hormone idlala indima ebalulekileyo ekwenziweni kokubukeka kwendoda kunye nokukhula kwezesondo. Abalinganiswa abesilisa, njengobunzima bethambo, izihlunu, ukuveliswa kwesidoda, kunye nokuqhuba ngesondo, zonke ziqhutywa zi-testosterone. Nangona kunjalo, ukuveliswa kwe-testosterone kwehla njengeminyaka enye. Kwelinye icala, i-testosterone yi-anabolic steroid efakwe emzimbeni ukuze incedise ekwakheni izihlunu nasekuphuculeni ezinye iimpawu zobudoda. Nabani na ohlupheka ngamanqanaba asezantsi e-testosterone uyacetyiswa ukuba athathe i-testosterone ukunceda ekuphuculeni ukuveliswa kwehomoni yendalo emzimbeni.
Testosterone phenylpropionate (I-1255-49-8) yi-anabolic steroid esetyenziswa ngabantu abaphethwe ziziphumo zamanqanaba asezantsi e testosterone. Ukunqongophala kwe-testosterone eyaneleyo emzimbeni kunokukhokelela kwiingxaki ezahlukeneyo zempilo ezinjenge-libido ephantsi, amanqanaba aphantsi esidoda, kwaye unokulibazisa ukukhula kweempawu zobudoda njengezwi elinzulu, iindevu, okanye izihlunu ngexesha lokufikisa. Ukuba ukhangela ichiza elizokukunceda kulwakhiwo lwesihlunu kunye nokufezekisa iinjongo zakho njengembaleki, ke ngoko i-testosterone phenylpropionate iyakuba yeyona nto ibalaseleyo. Le anabolic steroid ihambisa iziphumo ezisemgangathweni logama ulandela imiyalelo yedosi.
Ngokwesiqhelo, abenzi be testosterone banamathisela ichiza kunye neeeseli ezahlukeneyo ukuze bakwazi ukuhlala besebenza emzimbeni ixesha elide. I-Phenylpropionate yenye yee-esters eziqhelekileyo ezinamathele kwi-testosterone yokwandisa ubomi bokusebenza kwesiyobisi malunga ne-4 ukuya kwiintsuku ze-5. Abakhi bomzimba kunye iimbaleki baphakathi kwabona basebenzisi basebenzayo be-testosterone phenylpropionate kwihlabathi. Iyeza libanceda ukuba bomeleze amandla omzimba ngokubanzi, bakhe izihlunu, kwaye baphucule nesondo. Nangona kunjalo, njengaxa usebenzisa ezinye ii-steroid, kucetyiswa ukuba usoloko uye kuvavanyo lwezonyango ngaphambi kokuba uqale ukuthatha eli chiza. I-testosterone phenylpropionate isebenzisa Unokwahluka umntu ngamnye komnye.
Isebenza njani i-testosterone phenylpropionate?
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8) njengazo nezinye i-anabolic steroids ivuselela umzimba wakho ukuba uvelise iihormone zehomoni ezingakumbi. Iyeza liqinisekisa ukuba umzimba wakho unamanqanaba awaneleyo kunye azinzileyo e testosterone. Nje ukuba la manqanaba oyindoda abonelele kwinkqubo yakho yomzimba, uya kuthi ngokuzenzekelayo uqalise ukuzonwabela izibonelelo, kwaye unokufezekisa ngokulula iinjongo zakho zomsebenzi. Ihormoni ikwanoxanduva lokuphucula ilahleko yamafutha, ukugcina ubunzima bemisipha, kunye nokukhusela i-Osteoporosis.
Kuwo nawuphi na umntu owakha umzimba, izihlunu ezomeleleyo kunye namandla omzimba kubalulekile ekusebenzeni ngcono kuqeqesho nakukhuphiswano. Ihormone ye-testosterone ikwanceda ekuvuseleleni kwezicubu emva kokusebenza nzima ngakumbi ngexesha lomjikelo wokubaninzi. Ezi mahomoni zibophelela kwi-Androgen Receptors (AR) ukukhawulezisa ukulahleka kwamafutha kunye nokukhula kwemisipha kunye nokulungiswa. Nangona kunjalo, iziphumo ezingcono ze-testosterone phenylpropionate, kufuneka uhambe nedosi ngokutya okufanelekileyo kunye noqeqesho. Yazisa umqeqeshi wakho kunye nesondlo xa uqala ukuthatha i-testosterone phenylpropionate dosage. Nxibelelana nogqirha wakho kwangoko xa uphawula nayiphi na imiphumo emibi ukuthintela ezinye iingxaki zempilo.
2.Umjikelo we-testosterone phenylpropionate
I-testosterone phenylpropionate kufuneka inikezwe malunga ne-6 ukuya kwiiveki ze-8, kuxhomekeka kwinto ekufuneka uyifezekisile ekupheleni komjikelo. Ugqirha wakho uya kuyila eyona ilungileyo testosterone umjikelo we-phenylpropionate ngawe emva kokuvavanya imeko yakho yonyango. Ngamanye amaxesha ugqirha unokuyomeleza ixesha lethamo okanye anciphise. Uvavanyo rhoqo logqirha luya kubeka esweni inkqubo yamayeza ngexesha lomjikelo. I-testosterone phenylpropionate inokusetyenziswa yodwa ngexesha lomjikelo okanye kunye nezinye i-anabolic steroids zeziphumo ezingcono. Nangona kunjalo, musa ukudibanisa amachiza ngaphandle kokudibana namayeza akho.
Abaqalayo bacetyiswa ukuba baqale ngeedosi ezisezantsi kunye nemijikelezo emifutshane, enokulungiswa kamva ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Abasebenzisi be-testosterone phenylpropionate abaqhubayo banokubambelela kwixesha elingaphezulu kweeveki ze-8 okanye nangaphezulu. Musa ukunciphisa okanye ukwandisa umjikelo we-testosterone phenylpropionate, ukuba ugqirha akacebanga ukwenza njalo. Ngamanye amaxesha amayeza anokuwamisa umjikelo phakathi ukuba ufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezinokukhokelela kwiingxaki zempilo. Imizimba yabantu iphendula ngendlela eyahlukileyo ngamachiza ahlukeneyo; ke, ayizenzekeli ukuba iyeza likusebenzele njengoko unqwenela.
3.Iziphumo ze-testosterone phenylpropionate
Testosterone phenylpropionate (1255-49-8), xa isetyenziswe ngokufanelekileyo, ihambisa iziphumo ezintle kwaye ekugqibeleni iya kukunceda ufezekise iinjongo zakho. Ke ngoko, umthamo ofanelekileyo, ukutya, kunye nokusebenza uya kukuqinisekisa iziphumo ezisemgangathweni. Nazi ezinye zeziphumo eziqhelekileyo ze-testosterone phenylpropionate;
Ukukhula kwemisipha, sesinye sezizathu zokuba kutheni kufuneka uqale ngokuthatha i-testosterone phenylpropionate njengezakhi zomzimba kuba iyanceda ukukhulisa ukukhula kwemisipha. Imisipha idlala indima ebalulekileyo kubomi bomakhi kunye nokufezekisa ukuba kufuneka uthathe ii-steroids ezifanelekileyo ukuphucula ukukhula kwezihlunu. Wonke umntu owakha umzimba okanye iimbaleki unqwenela ukuba nezihlunu ezithandekayo, ezinokufumaneka ngokuthatha eli chiza linamandla.
Ukutshiswa kwamanqatha, ukusika imijikelezo nako kubalulekile kuba kunceda ekususeni amafutha athe kratya emzimbeni. I-testosterone phenylpropionate sisisongelo esinamandla okusika njengoko sonyusa imetabolism, ekhokelela ekutshisweni ngokukhawuleza kwamafutha omzimba. Ungasebenzisa iyeza lodwa okanye kunye nezinye i-anabolic steroids eziza kukhawulezisa inkqubo yokutsha kwamafutha.
Ukuvuselelwa kwemisipha ekhawulezileyo kunye nokulungiswa kwayo, ukusebenza kaninzi kunamaxesha amaninzi wolula izihlunu zakho ngenxa yokuphakamisa iintsimbi kwindawo yokuzivocavoca. Iintlungu onazo emva koko zinokuthintela uqeqesho lwakho kwaye ngamanye amaxesha zinokwenza kube nzima kuwe ukuba uqhubeke nokwenza. Nangona kunjalo, xa uthatha i-testosterone phenylpropionate, oko kuya kufuneka kuncinci kuneengxaki zakho kuba iyeza liphucula inkqubo yokuphilisa izicubu. Izihlunu zakho ziya kuhlala zipholile ngokukhawuleza ukukuvumela ukuba usebenze yonke imihla kwaye wenze kube lula ukuba ufumane iziphumo ozifunayo.
Ukunyusa amandla omzimba xa ewonke, ukungabikho kwamandla awaneleyo okusebenza kunye nokukhuphisana ngokufanelekileyo kuhlala kungowona mngeni mkhulu abajamelana nawo abakhi bomzimba kumgca wabo. I-testosterone phenylpropionate iya kukonyusa amanqanaba amandla akho okuvumela ukuba uqeqeshe iiyure ezinde kwaye ufezekise iinjongo zakho ngokukhawuleza.
Ukomelela kwenkqubo yethambo, isifo samathambo ngumceli mngeni ojamelene nabantu abaninzi, kwaye eli chiza liyanceda ekulweni nesi sifo sethambo. I-testosterone phenylpropionate iya kuphucula impilo yenkqubo yakho yethambo. Sele kuyiminyaka emininzi ngoku, oochwephesha besebenzisa eli chiza ukunceda abaguli bamathambo. Izifundo zibonakalisa ukuba i-testosterone phenylpropionate lelinye lawona mayeza anamandla okulwa nelahleko yokuphulukana nobunzima bethambo.
Ukuphucula ukuqhutywa kwesondo kunye nokutya; amanqanaba e-testosterone aphuculweyo aya kuphucula i-libido yakho. Kwelinye icala, umdla wakho wokudla uya kuphuculwa. Ke ngoko, le nto yenza ukuba i-testosterone phenylpropionate ibe yeyona mveliso ilungele bobabini ukwakha umzimba kunye nabantu abatshatisa ngesondo eliphantsi. Kwimijikelezo exabisa kakhulu, umdla wakho wokudla uya kuphuculwa kwaye kube lula kuwe ukufikelela kwiinjongo ozifunayo.
I-testosterone phenylpropionate yecala
Njengalo naliphi na elinye ichiza, i-testosterone phenylpropionate (1255-49-8) ikwanecala elisezantsi elifumaneka ikakhulu ngabasebenzisi abalisebenzisa kakubi. Kuya kufuneka usoloko ulandela imiyalelo yethamo ukuba ufuna ukunciphisa le miphumela. Nangona kunjalo, ngenxa yokuntsokotha kwemizimba yabantu, abanye abantu banokufumana iziphumo ebezingalindelekanga nasemva kokuthatha idosi elungileyo, kodwa oosomagqirha banokulawula oko. Ezinye zeziphumo ezibi ze-testosterone phenylpropionate zibandakanya;
Iyeza elinokubangela amabala kunye nemivumba emzimbeni wakho
Ingakhokelela kuxinzelelo oluphezulu
Unokufumana ne-hypertrophic ye-Prostate
Inokubangela ukuba i-baldness kubasebenzisi abathile
Ukongeza, kukho iziphumo ebezingalindelekanga ezincinci onokuthi ube nazo, ezanyamalala kwiintsuku ezimbalwa. Kubandakanya, ukulunywa kunye nokudumba okujikeleze indawo yenaliti, kodwa ukuba kuya kusiba mandundu njengoko kulindelwe, ugqirha wakho uya kukunceda ufumane unyango olululo. Iindaba ezimnandi kukuba uninzi lweziphumo ebezingalindelekanga ze-testosterone phenylpropionate zinokulawulwa ukuba wazisa ugqirha wakho ngexesha. Sukuqhubeka nokuthatha ichiza ukuba ufumana nayiphi na kwezi ziphumo zingasentla ngaphandle kwemvume kagqirha. Ngamanye amaxesha kunokuba ngumceli mngeni ukubuyisela emuva iziphumo ezibi ukuba amayeza aqala kade.
4.Umthamo weTesttosterone phenylpropionate
Idosi elungileyo lihlala likuqinisekisa ngeziphumo ezisemgangathweni kunye nangexesha elifanelekileyo. Kucetyisiwe umthamo we testosterone phenylpropionate ukusuka kwi-100-200 mg ekufuneka ithathwe kanye ngeentsuku ezintathu. Abasebenzisi abatsha, kucetyiswa ukuba uqale ngethamo ezisezantsi kumjikelo wokuqala emva koko unokuhlengahlengiswa kwimijikelo elandelayo. Umthamo kufuneka ulawulwe ngenaliti kunye nange-intramuscularly. Ngokwesiqhelo, kufuneka uthathe iyeza malunga neeveki ze-6-8. Nangona kunjalo, oku kungatshintshwa kuxhomekeka kwindlela umzimba wakho ojongana ngayo ne-testosterone phenylpropionate. Ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uqale ngeedosi ezisezantsi kunee-100mgs ngeentsuku ze-3, emva kokuvavanya imeko yakho yonyango. Amanenekazi acetyiswa ukuba athathe ithamo eliphantsi le-testosterone phenylpropionate ukuthintela ukuphuhliswa kweempawu zobudoda.
Ngakolunye uhlangothi, abakhi bomzimba obuphambili okanye iimbaleki i-200mgs ngeentsuku ze-3 ziya kuba yidosi efanelekileyo yokufezekisa iinjongo ozifunayo. Iziphumo ezingcono zihlala zihamba nedosi yakho ngokutya okufanelekileyo kunye nokusebenza ngakumbi xa ufuna ukwakha izihlunu okanye xa usika imijikelezo. Eli chiza lingasetyenziswa kunye nezinye i-anabolic steroids, kodwa likwanikezela iziphumo ezisemgangathweni xa zisetyenziswa zodwa. Kwimijikelezo yokuxhaphaza kakhulu, kungafuneka ubeke i-testosterone phenylpropionate nezinye i-steroids kodwa ubandakanye ugqirha wakho ukuba akuncede ufumane indibaniselwano elungileyo. Kwakhona, khumbula ukulandela yonke imiyalelo yethamo kuba ukusela ngokweqile kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu.
5.I-testosterone phenylpropionate isiqingatha sobomi
I-testosterone phenylpropionate inobomi obusebenzayo malunga ne-4 ukuya kwiintsuku ze-5 xa sele igonyelwe kwinkqubo yakho yomzimba. Ke ngoko, ichiza kufuneka lithathwe kanye ngeentsuku ezintathu okanye kabini ngeveki ukugcina ukubonelelwa ngokuzinzileyo kwehomoni ye testosterone emzimbeni wakho. Oku kwenza i-testosterone phenylpropionate efanelekileyo ye-anabolic steroid yabakhi abaninzi bomzimba ngenxa yobomi bayo obude bokusebenza. Kukho nexesha elaneleyo lendawo yakho yenaliti yokuphilisa ngaphambi kokuba uthathe umthamo olandelayo. Khumbula, i-testosterone iyakonyusa inkqubo yokuphiliswa kwemisipha, ke eli chiza lisebenza njengeyona nto incomekayo kulo naluphi na ugqatso okanye umakhi womzimba.
I-Testosterone phenylpropionate powder yenza ukongezwa okukhulu kwimijikelezo yokusika. Ukubonelela okuzinzileyo kwale hormone ye-testosterone yonyusa imetabolism ethi ekugqibeleni incede ekunciphiseni amafutha emzimbeni. Njengomakhi womzimba, kuya kufuneka uhambe kumjikelezo wokusika ukuze ususe iifatata zomzimba ezinokuthintela ekufikeleleni kwiinjongo zakho. Amafutha omzimba afakwe ngezantsi kwesikhumba kwaye anokwenza kube nzima kuwe ukuphucula umgangatho kunye nezihlunu ezibonakalayo ezihle. Kwiminyaka emininzi ngoku, amawaka eembaleki ebesebenzisa yona kwimijikelo yokusika kunye nokubaninzi.
Unokudibanisa i-testosterone phenylpropionate kunye nezinye i-anabolic steroid ezifanelekileyo zokusika imijikelezo njengeWinstrol, Anavar okanye trenbolone yeziphumo ezingcono. Kuxhomekeka kwimeko yakho yangoku kunye noko ufuna ukufezekisa, amayeza akho aya kukunceda ufumane i-dosage efanelekileyo yokusika ukukunceda ukuba ufumane imisipha njengoko usika amafutha omzimba angafunekiyo. Ukuphucula ukubonakala komzimba wakho njengembaleki okanye ukwakhiwa komzimba, ke kuya kufuneka uhambe ne-testosterone phenylpropionate yokuthintela umthamo ngokutya okufanelekileyo kunye nokusebenza.
7.I-testosterone phenylpropionate yobuninzi
Apha unenjongo enye kuphela, kukufumana ubunzima bemisipha ngexesha elifutshane kakhulu. Abakhi bomzimba bavame ukuqala ngomjikelo wokubaninzi, oya kuthi emva koko ulandelwe ngumjikelo wokusika. Abakhi bomzimba abaqhubele phambili baphinda bajikeleze umjikelo wokuxinana rhoqo ukufumana nokugcina amanqanaba emisipha. I-testosterone phenylpropionate yenye yezona zisetyenziswa kakhulu ze-anabolic steroid kwimijikelezo exineneyo. Nangona kunjalo, abanye iimbaleki bathanda ukuyifaka kunye nezinye iziyobisi ukukhawulezisa iziphumo. Imijikelezo enexabiso eliphindaphindiweyo ibandakanya ukusebenza nzima okunokuwolula imisipha yakho ukuya kuthi xhaxhe, kwaye ukuba awunazo izinto ezifanelekileyo njenge testosterone phenylpropionate, unokuva iintlungu eziqatha.
Le anabolic steroid ikhuthaza ukukhula kwemisipha kunye nokukhawulezisa inkqubo yokuphilisa izicubu. Ke ngoko, xa uthatha yakho I-testosterone phenylpropionate yobuninzi, uya kuqiniseka ngokufumana ubunzima bemisipha kunye nokuvuselela ngokukhawuleza kwezicubu. Iyeza likwanayo ne-ester ende, eguqulela ubomi obusebenzayo ixesha elide, ke uya kuba uyifaka inaliti kabini ngeveki. Ke, ukuvumela iindawo ezinaliti ukuba ziphilise ngaphambi kokuya kumthamo olandelayo. Ugqirha wakho, umondli, kunye nomqeqeshi kufuneka akukhokele kuyo yonke le nkqubo yokugcoba. Ngalo lonke ixesha qinisekisa ukuba bayazazi iinjongo zakho ngakumbi xa uqala umjikelo wokubaninzi okanye wokusika isikhokelo esifanelekileyo.
8.Inzuzo ye Testosterone phenylpropionate
I-testosterone phenylpropionate inikezela ngezibonelelo ezahlukeneyo kubasebenzisi abazisebenzisa ngokuchanekileyo kwaye balandele imiyalelo yethamo. Njengayo nayiphi na enye i-anabolic steroid, kufuneka uhambisane nemiyalelo yokusetyenziswa enikezwe ngumvelisi we-testosterone phenylpropionate kunye namayeza akho ukuze uzonwabele ezi zibonelelo. Eli chiza lingqiniwe ukuba liluncedo kwimidlalo nakwezonyango. Ukujonga uphononongo lwe-testosterone phenylpropionate eyahlukeneyo, Uya kuqaphela ukuba abasebenzisi abaninzi bonwabile kwaye bavakalisa ukoneliseka kwabo emva kokusebenzisa le potus anabolic steroid. Ezinye zezona zibalulekileyo ze testosterone phenylpropionate zibandakanya:
Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) yoKwakha(Ivula ithebhu entsha)
Ubomi obude obusebenzayo
Inxalenye efanelekileyo yokusebenzisa i-testosterone phenylpropionate (1255-49-8) kukuba uya kufuna ukuthatha iipilisi zakho kabini ngeveki. Oko kwenza le anabolic steroid yenye yezona ziyobisi zikhethwayo ngabaakhi bomzimba kunye neimbaleki. I-testosterone phenylpropionate ihlala isebenza kwinkqubo yemizimba yakho malunga ne-4 ukuya kwiintsuku ze-5, enika iindawo zakho zealiti ixesha elaneleyo lokuphola ngaphambi kokuba uthathe idosi elandelayo.
Yenza iziphumo ezisemgangathweni ngexesha elifutshane
I-testosterone phenylpropionate iphakathi kwe-anabolic steroids ezimbalwa ezenza ngokukhawuleza kwimarike namhlanje. Uya kuthatha kuphela eli chiza ubuninzi beeveki ze-8, kwaye uya kufikelela kwiinjongo zakho nokuba uyisebenzisa kwimijikelezo yokusika okanye yokuxhaphaza. Nangona ugqirha wakho eyolula imijikelezo ngokuxhomekeke kwiinjongo zakho okanye kwinkqubela phambili emva kokuthatha iyeza, isenomnye wemijikelezo yedosi emfutshane kwihlabathi le-anabolic steroids.
Yandisa ukusebenza kwakho
Njengombaleki okanye ukwakha umzimba, kufuneka amandla kunye namandla omzimba ukufezekisa iinjongo zakho zomsebenzi. I-testosterone phenylpropionate iphucula ukusebenza kwakho ngokubanzi kuqeqesho nakukhuphiswano. Kwelinye icala, eli chiza lidlala indima ebalulekileyo ekuncedeni iimbaleki kunye nabakhi bomzimba ukuba banciphise iintlungu zemisipha kunye nokudinwa emva kokuzilolonga okanye ngexesha lokhuphiswano. Kuya kufuneka uqinisekise ukuba ulandela yonke imiyalelo yedosi ukonwabela iziphumo ezisemgangathweni. Ngexesha lokugqiba kwakho umjikelo we-testosterone phenylpropionate, uya kuba ukhule amandla okuthatha ngokukhuphisana noqeqesho.
Unyango lwazo zonke iziphumo zokusilela kwe testosterone
Kwilizwe lezonyango, ogqirha basebenzisa i-testosterone phenylpropionate ukunyanga abaguli abaneziphumo ezibi ze-testosterone njenge-sex drive ephantsi emadodeni, isifo samathambo, phakathi kwezinye izifo. Amanqanaba asezantsi e testosterone, ngakumbi emadodeni, eza neengxaki zempilo ezahlukileyo ezisetyenziselwa ukunyanga i-testosterone phenylpropionate. Umzekelo, xa iimpawu zobudoda zilibaziseka ukukhula, ke eli lelona chiza likhethiweyo ngonyango.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezincinci
Nangona zonke i-anabolic steroids ziza neziphumo ebezingalindelekanga ezahlukeneyo, ukuthatha i-testosterone phenylpropionate imithamo iya kubhengeza kwiziphumo ezibi kakhulu ukuba uzithatha ngokuchanekileyo. Yenye ye-anabolic steroid ezimbalwa kwintengiso eneziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa. Ubuninzi beziphumo ezibi ze-Testosterone phenylpropionate zenzeka kuphela kwabo basebenzisa kakubi iziyobisi. Logama nje unamathela kuyo yonke imiyalelo yethamo, ulungile ukuba uhambe, kwaye uyonwabele zonke izibonelelo ze testosterone phenylpropionate.
9.Uvavanyo lwe-testosterone phenylpropionate
Ngokwesiqhelo, abathengi abaninzi baveza izimvo zabo malunga nemveliso ethile ngokusebenzisa uphononongo kunye namaxabiso. Njengazo nje ezinye iimveliso zonyango, i-testosterone phenylpropionate ifumene impendulo evela kubasebenzisi abahlukeneyo. Uninzi lwabasebenzisi banelisekile ziziphumo eziziswe sisiyobisi ngakumbi kwilizwe lezemidlalo apho iimbaleki kunye nabakhi bomzimba besisebenzisa ukubanceda bafezekise iinjongo zabo zomsebenzi. Kwimbaleki, iyeza liye lanceda uninzi ukuba lufumane ubunzima bemisipha ngexesha lomjikelo wokubaninzi kunye nokutsha kwamafutha omzimba kwimijikelezo yokusika.
Kwihlabathi lonyango, i-testosterone phenylpropionate ifumene ukulinganiswa okuhle kunye nokujonga okuhle. AmaMedi axele ukuphumelela kweli chiza kunyango lweempawu ezisezantsi ze-testosterone kwindoda. Njengoko kuchaziwe ngaphambili kweli nqaku, amanqanaba asezantsi e-testosterone anokukhokelela ekuqhubeni ngesondo okuncinci, ukuqaqanjelwa kwamathambo, kunye nokulibaziseka ekuphuhlisweni kweempawu zobudoda ezinje ngokujula kwelizwi, iindevu, phakathi kwabanye. Amawaka ezigulana ayakudumisa ne-testosterone phenylpropionate emva konyango olunempumelelo lwezifo ezahlukeneyo.
I-10 ye-Anabolic Steroids eyaziwa kakhulu ngokuba ngumgubo kwi-2019(Ivula ithebhu entsha)
Kwakhona, abanye abasebenzisi bakhalaza ngokuba namava amabi kakhulu nge-testosterone phenylpropionate. Nangona kunjalo, bavakalise ukuxinana kwabo ngokungaphezulu okanye ukusetyenziswa gwenxa kwe testosterone phenylpropionate. Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ayisiyiyo yonke ichiza elisebenzela umhlobo wakho oya kukusebenzela ngokuzenzekelayo. Sisoloko sicebisa bonke abasebenzisi bemveliso ukuba baye kuvavanyo lwezonyango ngaphambi kokuba baqalise ukuthatha imithamo. Ihlala ingumbono olungileyo ukubandakanya ugqirha wakho kwinkqubo ye-testosterone phenylpropionate yedosi yamava angcono.
Baninzi abathengisi be testosterone phenylpropionate abafumaneka kwi-intanethi nakwiivenkile ezibonakalayo kwihlabathi jikelele. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ulumke kakhulu ukuba ufuna ukufumana ichiza eliphakamileyo eliya kukuqinisekisa ngeziphumo ezisemgangathweni ngokuphela kwemijikelezo yakho. Ayisiyo yonke imveliso ye-testosterone phenylpropionate oyifumana kwi-intanethi inyani, ezinye zikho nje ukwenza imali, kwaye azikhathalelanga iziphumo oya kuzifumana emva kokuthatha iidosi zakho. Phambi kwakho Thenga i-testosterone phenylpropionate, kuqala wenze uphando lwakho. Qinisekisa ukuba uyayiqonda indlela esebenza ngayo umthengisi we testosterone phenylpropionate ngaphambi kokuba wenze naluphi na ucwangco. Funda uphononongo olwahlukileyo lwabathengi kunye nokujonga ukulinganiswa kwenkampani.
Singumxhasi ophambili we-testosterone phenylpropionate kunye nomenzi kwingingqi. Iwebhusayithi yethu iyasebenziseka, unokwenza i-oda yakho usebenzisa i-smartphone, ithebhulethi, okanye ikhomputha yakho kwindawo intuthuzelo yekhaya okanye eofisini. Sisoloko siqinisekisa ukuba sizisa zonke iimveliso ngexesha elifutshane kakhulu. Unga Thenga i-testosterone phenylpropionate powder ngobuninzi okanye ngokwaneleyo nje kumjikelo wakho wokubaninzi okanye wokusika imijikelezo. Khumbula, nokuba ungalifumana njani na ichiza ngokulula, ungaqali ukulithatha ngaphandle kokhokelo lukagqirha wakho.
Ngaphandle koko, sihlala sicebisa abathengi bethu abanyanisekileyo ukuba baqonde ukuba imithetho yelizwe labo ithini malunga nokuthenga okanye ukuba nayiphi na i-anabolic steroid ngaphambi kokuba benze umyalelo kwiqonga lethu. Asifuni kuthanda ukubeka abathengi bethu engxakini nabanyanzeli bomthetho bokuthenga iimveliso zethu ezisemgangathweni. Qinisekisa ugqirha wakho ukuba ngaba ikhona na izithintelo xa uthenga i-testosterone phenylpropionate yokwakha umzimba. Ungasinxibelelana nathi nangaliphi na ixesha xa ufuna ukwenza iodolo okanye xa unexhala okanye imibuzo malunga neemveliso zethu. Abameli bethu beedesika yoncedo bahlala bekulungele ukukunceda.
11.I-testosterone phenylpropionate vs I-testosterone propionate yokwakha umzimba
Akukho mahluko ubalulekileyo phakathi kwezi ziyobisi zimbini kuba zisebenza ngendlela efanayo. Zonke ziyi-anabolic steroids, kwaye zabelana ngayo isiqingatha sobomi malunga ne-4 ukuya kwiintsuku ze-5. Unokukhetha ukuthatha enye yezi zinto zibini kwaye ufumane iziphumo ezifanayo. Zombini i-testosterone phenylpropionate kunye ne-testosterone propionate zisetyenziswa ngabakhi bomzimba ukubanceda ekwakheni izihlunu kunye nokusika imijikelezo. Amachiza anyusa amanqanaba e-testosterone emzimbeni, nto leyo ethi ikhokelele ekuphuculeni ukuhanjiswa kwesondo, ukukhula kwemisipha, kunye nokusikwa kweentsini ezigqithisileyo zomzimba. Iimbaleki ezininzi zikwasebenzisa nasiphi na isiyobisi ezibini ukonyusa ukusebenza kwazo kuba zisonyusa amandla omzimba apheleleyo ezibenza bakwazi ukukhuphisana ngokufanelekileyo.
I-testosterone phenylpropionate kunye ne-testosterone propionate yahlukile kuphela kwizakhiwo zabo zeekhemikhali, kodwa babelana ngobuninzi beempawu. Umthamo weesoftware ze-anabolic ezimbini kufuneka uthathwe kabini ngeveki. Nangona kunjalo, bonana nodokotela wakho malunga namachiza oza kuwasebenzisa kunye nezibini iziphumo ezingcono. Akuyi kwenza mqondo naziphi na ukuba uthathe bobabini Testosterone phenylpropionate kunye ne-testosterone propionate ngaphakathi komjikelezo ofanayo. Ukuthatha kunye ngexesha kuya kuba yingenelo ngakumbi, kodwa uhlala uqinisekisa ngugqirha wakho. Ungathenga zombini i-anabolic steroids kwiwebhusayithi yethu.
El Osta, R., Almont, T., okhutheleyo, C., Hubert, N., Eschwège, P., & Hubert, J. (2016). Ukuxhatshazwa kwe-antibolic steroids kunye nokungabikho kwamadoda. Isiseko kunye neekliniki kunye neekliniki, 26(1), 2.
UTretzel, L., Thomas, A., Geyer, H., Gmeiner, G., Forsdahl, G., Pop, V.,… & Thevis, M. (2014). Ukusetyenziswa kweendawo ezomileyo zegazi ekujongeni ulawulo lwe-anabolic steroid esters. Inkcazo yoluhlalutyo lwamachiza kunye nezolimo, 96, 21-30.
Bhawani, SA, Sulaiman, O., Hashim, R., kunye no-Ibrahim, MN (2010). Uhlalutyo lwe-chromatographic encinci yeasids: Uhlalutyo. Ijenali yeTropiki yoPhando lweMayeza, 9(3).
Solimini, R., Rotolo, MC, Mastrobattista, L, Mortali, C, Minutillo, A., Pichini, S.,… & Palmi, I. (2017). I-Hepatotoxicity ehambelana nokusetyenziswa okungekho mthethweni kwe-anabolic androgenic steroids xa kwenziwa idoping. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 21(1 Suppl), 7-16.